Tranofi-terminal tsy hita
fanontaniana Tranofi-terminal tsy hita
8 volana 1 herinandro lasa izay #1307 by tharat
Raha mankany amin'ny seranam-piaramanidina sasantsasany (seranam-piaramanidina amerikana aho aloha) dia tsy hita ny endriky sy ny seranam-piaramanidina ankapobeny. Misy famahana ny fahalalana ve amin'ity?
8 volana 4 andro lasa izay #1311 by donniganc10
Azonao atao ny manamarina ny fijerinao mba hahitana hoe inona ny halalin'ny fitiavanao
7 volana 1 herinandro lasa izay #1339 by jduca
Nanana olana toy izany aho izay novaliako tamin'ny fanovana ny lamina izay nampiandraiketan'ny Addon Scenery. Manoro hevitra anao aho mba hahazo ilay programa maimaim-poana antsoina hoe Config Editor ary manandrana ny fanovana ao amin'ny baiko izay misy entana mavesatra. Mirary anao ho tsara vintana.
7 volana 1 herinandro lasa izay #1340 by jduca
Miala tsiny. Ny anaran'ny fandaharana dia ny Scenery Config Editor.
7 volana 1 herinandro lasa izay #1341 by tharat
Misaotra anao jduca Ho hitanao izao!